Vaovao - PRODICTION SAFE IHANY NO TOKANA MANOMPOANA, TSY MISY FARANY
inona ny pridcution azo antoka: ny prodcution azo antoka dia ny firaisan'ny fiarovana sy ny prodcuton, ary ny tanjony dia ny hampiroboroboana ny famokarana soa aman-tsara, ary ny prodcutionmust dia tokony ho azo antoka. Ny fanaovana asa tsara amin'ny fiarovana sy ny fanatsarana ny toe-draharaha; ny fihenan'ny fatiantoka fananana dia mety hampitombo ny fahombiazan'ny orinasa, ary tsy isalasalana fa hampiroborobo ny fivoaran'ny famokarana; ary ny prodcution dia tokony ho azo antoka satria ny fahamaimasoana dia fepetra takiana amin'ny prodcution, ary ny famokarana canbe tsy azo antoka raha tsy misy fiarovana. .Ny fanaovana asa tsara amin'ny fiarovana ny famokarana sy ny fihenan'ny lozam-pifamoivoizana ary ny fatiantoka manerantany dia tsy andraikitra ara-dalàna amin'ny orinasa ihany, fa andraikitra lehibe koa eo amin'ny orinasa .Noho izany, amin'ny asa aman-draharaha ataontsika dia tsy maintsy miasa arakaraka ny fitsipika famokarana fiarovana isan-karazany.
Ny famokarana fiarovana dia misy fiandohana fotsiny ary tsy misy ny teboka farany .Ny fiarovana ny asa dia asa farany. Tsy maintsy miasa tsy an-kijanona foana ianao .Ny lakolosy fanairana dia tsy maintsy miteniteny foana. Tsy afaka mivoaka tsindraindray ianao, tampoka mangatsiaka sy mafana. Manana psikolojia kely fotsiny ianao sy eritreritra mandringa .tsy tokony hatao meton "zava-dehibe lazaina, faharoa amin'ny fanaovana, fa tsy tokony hatao" .Ny fivoaran'ny siansa sy ny haitao, ny famokarana azo antoka dia tojo fiovana sy olana vaovao ihany koa. Tokony ho tsara ny mahita toe-javatra vaovao amin'ny fomba fanao vaovao ary manolotra tranga vaovao .Misy olana vaovao ny probleme, raha misy ny asa vaovao sy maika dia tokony hametraka foto-kevitra fiarovana isika "ny fiandohana fotsiny ary tsy misy ny teboka farany". Tena "fitandremana" hisorohana ny ho avy.